Hurumende nhasi yamisa kushandiswa kwemari dzekune dzimwe nyika pakutenga nekutengeserana uye inoti Zimbabwean dollar unove mubatanidzwa wemaRTGS dollars nemabhondi notes ndiyo mari yave kushandiswa chete munyika.
Izvi zvaziviswa negurukota rezvemari, muzvinafundo Mthuli Ncube muchiviso cheStatutory Instrument 142 of 2019 icho chaburitswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette nhasi.
Muchiziviso ichi, VaNcube vatiwo vaye vane maNostro Foreign Currency Accounts, vacharamba vachiwana mari dzavo iri mari yekunze sezvavagara vachiita.
Vatiwo vaye vanotenga zvinhu kunze vacharambawo vachibhadhara mutero wekupinza zvinhu munyika kana kuti duty vachishandia mari yekunze.
VaNcube vati vatora danho iri mushure mekuona kuti vemabhizimisi vange vave kutara mitengo yavo vachishandisa madhora ekuAmerica inove mari isingawanikwe neveruzhinji.
Vatiwo vaye vane mari dzekunze vanokwanisa kudzichinja mumabhanga kana maBureau de Change.
Mashoko avaNcube atsigirwawo neimwe nyanzvi munyaya dzezvehupfumi uye vaimbova mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Industries VaCallisto Jokonya.
Panyaya yekuti zvangoitwa nechimbichimbi, VaJokonya vati hurumende yange isingadi kungwandza vari kupa kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo.
Asi nyanzvi munyaya dzehupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute, Doctor Prosper Chitambara, vaudza Studio 7 kuti danho ratorwa nehurumende ratoita kuti vanhu vaite chipatapata kumhanya kumabhanga kunotora mari yekunze yakaita semadhora ekuAmerica nemaRands sezvo vachitya kuti mari idzi dzinogona kuchinjwa kuitwa maRTGS dollars nehurumende.
Doctor Chitambara vati semaonero avo, danho iri richaita kuti vemabhizimisi varambe vachitenga mari yekunze pamukoto sezvo mumabhanga musina mari yekunze yakakwana.
Vanotiwo kushandisa mari yemuno handiko kunoderedza mitengo vachiti vanotarisira kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira uye zvinhu zvichatanga kushaikwa muzvitoro.
Vanoongorora nyaya dzehupfumi, VaMasimba Kuchera, vaudza Studio 7 kuti kudzora Zimbabwe Dollar kunogona kutokaganisa zvinhu zvakanyanya sezvo vanhu vasina chivimbo nemari yemuno.
Mutungamiriri wesangano revemabhizimisi reConfederation of Zimbabwe Industries, VaHenry Ruzvidzo, vaudza Studio 7 havangataure zvakawanda pamusoro pedanho ratorwa hurumende vachiti vakamirira kunzwa zvikonzero zvaita kuti danho iri ritorwe.
Kunyangwe hazvo zviri kunze kwemutemo kutengesa mari pamusika mutema, vanhu vakawanda nemabhizimisi vari kushandisa musika uye sezvo vachishaya mari iyi mumabhanga uye mutengo wayo wakaderera mumabhanga.